Chọpụta amara nke ụgbọ mmiri Mediterranean | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na ịchọrọ echiche nke gaa ezumike ezumike n’oké osimiri Mediterenian dị ukwuu, lee ihe anyị na-agwa gị. Gbọ mmiri Mediterenian dịkarịsịrị maka ọtụtụ ihe. Enwere ụdị njem dị iche iche, a na-eme njem dị iche iche na ebe ndị mara mma dịka Barcelona, ​​Santorini ma ọ bụ Marseille na anyị nwekwara ike ịchọta ọtụtụ ọrụ na ntụrụndụ n'ụgbọ mmiri.
Mee Irughari Mediterranean bụ ihe ọtụtụ narị mmadụ na-eme kwa afọ. Otu ebe nwere oke ihu igwe na ọtụtụ ebe jupụtara na akụkọ ihe mere eme na ịma mma mara mma na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta. Mana ọ bụrụ na ị ga-ahazi njem gị ị kwesịrị ịma ihe ole na ole, ka ị ghara ịla n'iyi na onyinye niile na njem.
1 Mgbe aga njem na Mediterenian
2 Ihe iweta na nrughari gị
3 Dị ụgbọ mmiri Mediterranean
4 Ebe ndị njem akwụsị na njem ụgbọ mmiri Mediterranean
4.3 Valletta na Malta
Mgbe aga njem na Mediterenian
Mediterenian na-enye oke ihu igwe n'ime afọ. Nchịkọta na-ekpo ọkụ nke ukwuu na isi ihe ụfọdụ, yabụ ndị oge kacha mma bụ oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri, mgbe ihu igwe dị ntakịrị. Ọ bụrụ na anyị ga-agagharị na Mediterenian, ọtụtụ ndị na-ahọrọ oge ọkọchị, yabụ ọnụahịa na-adịkarị elu n'oge a, ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ezumike ha ma nwee ike ịnụ ụtọ ihu igwe dị mma. Ihe ọ bụla oge ị na-abanye, ịnwere ike ịnụ ụtọ ọdọ mmiri ụgbọ mmiri na ezigbo igwu mmiri na ọdụ ụgbọ mmiri dị iche iche na ebe nchekwa.
Ihe iweta na nrughari gị
Na njem ụgbọ mmiri ị nwere ike ịme ọtụtụ ihe, yabụ ọ dị mkpa iburu n'uche ihe anyị kwesịrị iweta. Nwee mgbe niile anwu anwu anwu, dika o na-adi ka sunbathe ma jiri odo odo, gbakwunyere n'eziokwu na anyanwụ Mediterranean nwere ike ịgbanye anyị ngwa ngwa. N’aka nke ọzọ, anyị ga-eyi akwa mara mma na uwe mara mma maka emume pụrụ iche. Akpụkpọ ụkwụ dị mma dị mkpa, ebe ọ bụ na n'ọdụ ụgbọ mmiri ọ na-adịkarị ka ị ga-eje ije ma ọ bụ gaa njem ọ bụla n'ụbọchị ụgbọ mmiri ahụ na-akwụsị.
Dị ụgbọ mmiri Mediterranean
Na Mediterenian ị nwere ike ịhọrọ mpaghara abụọ dị iche iche. N’otu akụkụ bụ Western Mediterranean, nke nwere ụsọ mmiri nke Spain, ya na agwaetiti Balearic a ma ama, France na Italytali. N’akụkụ nke ọzọ anyị nwere ọwụwa anyanwụ Itali, agwaetiti Greek na Turkey. Ha dịkwa nnọọ mma ma ebe dị iche iche dị iche iche. Zọ dị mma iji họrọ otu mpaghara ma ọ bụ ọzọ bụ iche echiche gbasara ụdị obodo anyị chọrọ ịhụ. Barcelona, ​​Marseille, Ibiza ma ọ bụ ọbụna Rome ma e jiri ya tụnyere ebe ndị dị ka Istanbul, Venice ma ọ bụ Santorini.
na njegharị nke ụlọ ọrụ ọ bụla na-egosi anyị n'ụzọ doro anya nke a ga-eleta, oge ụgbọ mmiri na nkwụsị na njem ndị ọzọ. Ozugbo anyị họọrọ mpaghara, anyị ga-ahọrọ ụzọ mgbagharị na ya. Ihe mbụ bụ iburu n'uche ụbọchị ole anyị nwere. Ma, n'etiti njem njegharị o kwere omume, họrọ nke kasị amasị gị. Lee anya na nkwụsị ha na-eme yana oge ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ obodo na njem mmụta enwere ike ịme na mpaghara ahụ.
Ebe ndị njem akwụsị na njem ụgbọ mmiri Mediterranean
Na njem ụgbọ mmiri nke Mediterenian ụfọdụ akpịrịkpa kwụpụta na-adọta a otutu anya ndị njem nleta na nke ahụ na-abụkarị isi ebe nkiri ụgbọ mmiri. Have ga-achọpụta ihe nkwụsị ndị ahụ nwere ike ịbụ n'ihi na n'otu njem ụgbọ mmiri anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ obodo na isi ihe nwere mmasị na-agaghị ahapụ anyị enweghị mmasị na nke a bụ amara kachasị mma nke njem.
Obodo a, isi obodo, bụ otu n'ime ebe nkwụsị maka ọtụtụ njem na Balearic Islands. N'ime obodo ị nwere ike ịhụ ebe dịka nnukwu ụlọ ụka Katidral nke Santa Maria amara dị ka La Seu na Levantine Gothic style. Ọ dị n'ụsọ mmiri nke Palma ma n'èzí ma n'ime ya dị egwu n'ezie. Na obodo ị kwesịrị ị na-ahụ mara mma Bellver Castle, nke nwere ihe na-akpali okirikiri atụmatụ. Ihe ndị ọzọ enwere ike ileta bụ Palacio de L'Almudaira ma ọ bụ nwee ụsọ osimiri ya na ịgagharị.
Nke a bụ otu n'ime obodo ndị nwere ike ịnwe n'etiti njem njegharị. Venice na-enye anyị ebe ndị na-adọrọ mmasị Ogige St. Mark na Basilica ya, Obí nke Doge ma ọ bụ nnukwu ọwa. The Rialto Bridge ma ọ bụ Bridge nke Sighs bụ ezigbo ihunanya ebe a na-ekwesịghị ịhapụ.
Valletta na Malta
Obere agwaetiti Malta nwere ike ịbụ ebe ọzọ ụgbọ mmiri na-enye. Agwaetiti na-enye anyị ebe pụrụ iche dịka ọmarịcha obodo La Valletta, ya na n'okporo ámá ochie ya na amara ya, ma ọ bụ Mdina, ka ochie. Anyị nwekwara ike ịhụ agwaetiti Gozo na osimiri ya na ọnụ ọnụ ugwu ya ma ọ bụ agwaetiti Comino ya na Blue Lagoon a ma ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Irughari Mediterranean